Maqaallo | January 2020
Leukemia ee lo'da: calaamadaha, sababaha, saamaynta
Maanta, tuulo kasta oo ka tirsan guriga waxaa ku jira lo'da, iyo mararka qaarkood - ma aha mid. Dadku waxay xayawaankan xayawaan u yihiin waxtarkooda sare, taas oo ah, waxa ka mid ah waxyaabaha lo'da ka bixiya caanaha iyo hilibka. Laakiin inta badan waxaad la kulmi kartaa xaalad noocaas ah marka xayawaanku bilaabay inuu "u engego." Inta badan, waxay calaamad u tahay cudur, sida leukemia.
Diyaargarowga beesha ku dhagan dacha badanaa waxay bixisaa beeritaanka noocyo kala duwan oo dhirta ornamental ah. Nasiib darro, badankoodu waa qorrax-jecel oo kaliya ku qarsoon ee hooska. Laakiin maxaa dhacaya haddii badi goobtu ku taallahay xagga hoose ee hooska? Jawaabtu waa mid sahlan - ku samee sambabada. Ubaxeeda waxay noqon doontaa quruxda aad u qurxoon ee beerta oo dhan, iyo fududaynta marka la eego daryeelka ayaa kuu ogolaaneysa inaadan waqti badan ku qaadin dhirtaas.
Ukraine ayaa ku qiyaastay 827.000 tan oo ah hilibka doofaarka iyo hilibka hilibka ee sannadka 2016, taasoo 6.7% ka badan sanad ka hor. Waxaa soo tebiya Waaxda Lafagurista ee Ururka "Swine Ukraine" iyadoo la tixraacayo xogta Kulanka Wadahadalka Dhaqaalaha. Sanadkii hore isticmaalka doofaarka ayaa ka horreeyay heerka la saadaaliyay.
HM.CLAUSE - shirkadda abuurka, abuuraha nooca caanaha ah ee yaanyada Raf, bandhig weyn oo caalami ah ayaa soo bandhigay noocyo kala duwan oo yaanyo leh sifooyin gaar ah marka loo eego dhadhanka, qaabka iyo muuqaalka. Shirkadaha Isbaanishka ah ee masuul ka ah waxsoosaarka iyo qaybintooda, oo ay ku jiraan Casi, Palma, Biosabor iyo Agrupalmeria, martidu waxay ku raaxaysan karaan dhadhanka iyaga oo siinaya fursad ay ku dhadhamiyaan dhadhanka gaarka ah iyadoo ay ugu wacan tahay isku dheelitirka ugu wanaagsan ee udub dhexaad iyo macaan.
Sharciga cusub, sanadkii la soo dhaafay ee Spain, ayaa looga golleeyahay in la tirtiro dhammaan baakooyinka iyo weelasha lagu isticmaalo dukaamada. Baakooyinka waa inay noqdaan kuwo la burburin karo ama qaabab kale oo loogu talagalay bedelida bacaha balaastigga, laga bilaabo January 1, 2021. Ilaa hadda, tan iyo markii la dhaqan geliyey sharciga, bishii July 2018, kalluumeyaal ayaa horey u suurtagashay in ay yareeyaan bacaha balaastiga ah ee macaamiisha ee xarumahoodu ku leeyihiin 50%, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay FEDECARNE Spain.
Duufaan kuleyl ah oo ubax leh ubax leh quruxda midabka leh ee quruxda badan ayaa noqon doona quruxda quruxda badan ee guriga. Geeddi waa gebi ahaanba aan qabyo ahayn ee daryeelka, uma baahna xaaladaha gaarka ah ee deegaanka, sidaas darteed way fududahay in guriga lagu koro. Fasiraadda Vallota, ama sida loo yaqaan "ubax dabka", waa dhirta kuleylka leh ee reerka Amaryllid, oo ku taala Koonfur Afrika.
Ka bilowga beeralayda ubaxa markiiba ama wajahaan dhibaatada muuqaalka lakabka lakabka ah ee dusha sare ee dheriga, iyo badanaaba tani waxay keenaysaa dareen walaac ah dhirta gudaha. Dhab ahaantii, xaaladdan ciidda ma aha dhibaato halis ah oo si weyn u waxyeeleyn karta geedka, laakiin arrimuhu waa halis.
Qurxinta Kuuriyaanka ayaa si tartiib tartiib ah ugu fadhiistay miiska, iyadoo si tartiib tartiib ah u lumisay xayawaankeeda. Maanta, tapas waxaa laga heli karaa dukaamo khaas ah, iyo dukaamada, iyo suuqyada cuntada. Saladhyada basbaaska leh waa cunto yaryar, oo isku darka ah la kariyey ama baradho la shiilay oo casho sharaf leh.
Dagaalkii 104aad ee Bilowga, Agro, Kiev
Ukraine waxay had iyo jeer caan ku tahay guulaheeda bani'aadamnimada, iyo haddii aad horayba u suurtagashay in ay ku soo galaan meelaha ugu faa'iidada badan ee xiriirka suuqa kala duwan ee agronomka iyadoo la bilaabayo biloow badan oo lagu guuleysto, ka dibna waxaa jira war wanaagsan. Febraayo 15, 2018, 104-da Dagaal ee Bilowga iyo Agro ayaa la qaban doonaa, kaas oo abaabulaya mashruuca maalgalinta Startup.
Xilliga jiilaalka, jidhku wuxuu ku yar yahay fiitamiinada, iyo si uu u buuxiyo sahaydooda, waxaan ku faraxsanahay in aan furi karno xagaaga: caano, juus ah, jajab, xajin, jellies. Dhanka kale, macaanka 20% ee qaddarka bilawga ah ee fitamiin C ayaa sii ahaan doona, halka diyaarinta miro kulul la yareeyo kulaylka iyo ilaalinta fitamiinada si ka fiican, ka sokow, kuleylka wakhtiga gaaban waxaa loola jeedaa in laga saaro hawada sheyga iyo burburinta habka enzim ee oksidiyamka fitamiinada.
Faransiiska dhadhanka hilibka barbezie
Jiilkii hore ee Faransiiska ah ee digaagga Barbados ayaa muddo dheer ku guuleystay ixtiraamka beeralayda Ruushka. Oo ma aha wax la yaab leh, sababtoo ah shimbir shisheeye ah oo aan qabyo ahayn ee daryeelka, si deg deg ah ku habboon cimilada adag oo siinaya hilibka dhabta ah, hilib delicious. Wax badan ayaan ka baranaynaa. Taariikhda asaasiga ah Digaagga Barbaze ayaa markii hore la soo dhajiyay dhawr asbuuc ka hor magaalada yar ee Faransiiska ee Barbezieux.
Baradhada "Tuleyevsky" - waa noocyo badan oo ka mid ah dhinacyada ganacsatada iyo qoysaska gaarka ah. Waa mid midho baddan oo fudud oo nadiif ah. Dalagyada xididku uma baahna xaalado gaar ah beerashada, laakiin ma dhaawici doonaan si ay u bartaan dhamaan sifooyinka kala duwan ee hore. Taariikhda taranta Noocyada kala duwan waxaa lagu soo bartay jaangooyooyinka Machadka Cilmi-baarista ee Kemerovo (Siberia).
Cawska qumman ee cawska dhalaalaya ayaa ah habboon in mulkiilayaasha badan ee guryaha guryaha iyo dacha ay isku dayayaan in ay gaaraan. Si kastaba ha noqotee, qof walbaa kuma adkeysan karo "timo", iyo sababta keentay guuldarada badanaa waxay ku jirtaa xulashada qaldan ee cawska cawska. Noocyada cawska casriga ah ee casriga ah Farsamaynta jaridda cawska, oo ay ku jiraan caws, waxay leeyihiin dhowr kooxood, oo loogu talagalay inay ka shaqeeyaan meelo kala duwan.
Cilmi-baadhayaasha Samara waxay cabbaan shaaha mar kasta oo tufaax ah
Ruushka, saynisyahanno dhallinyaradu waxay ku faanaan guulo cusub - suxuun la tuuray oo laga sameeyey alaab la cuni karo. Qalabka ceeriin ee loogu talagalay soo saarista taarikada iyo muraayadaha maahan wax la yaqaano polymers iyo selulose, laakiin ... Suugo tufaaxa. "Marka dadku marka hore maqlaan khubarada noocan ah, waxay ka walaacsan yihiin macluumaadkan," ayaa leh horumariyayaal ka socda magaalada Samara.
Wareegga xidhitaanka hilibka hilibka digaaga ayaa waxaa maamula beeralay cusub oo ka soo jeeda Ukraine. Nikolai Kuzmenko ma aysan aheyn oo keliya in uu koro beeraha dabacasaha dabiiciga ah ee quudinta shimbiraha, laakiin sidoo kale wuxuu abuuray qalab biogas oo u gaar ah oo u oggolaanaya inuu soo saaro bacriminta organic. Muddo afartan sanno ah, beeralay ganacsade ah ayaa siinaya dhulkeeda nafaqooyinka iyo gaaska noolaha.
Masiibo ayaa ka dhacday beerta daaqada ingiriiska ah ee Derek Mead. Ninka wuxuu ahaa dhibane udub dhexaad u ah iyo falalka miyir la'aanta ah ee eey la jecel yahay. "Derek wuxuu bilaabay baabuurkiisa, wuxuuna ka baxsaday baabuurka si uu u xiro albaabka u horseeday barxadda," saaxiibadii dhintay ayaa u sheegay. "Dabadeedna, dabaasha, waxa uu ahaa eyga Derek.
"Faransiiska Faransiiska". Ukraine ayaa garaacday rikoodhka si ay u ururiyaan canab waaweyn
Beerlayda gobolka Odessa sanadkan ayaa ku faraxsan goosashada aan horay loo arag - beeralaydu waxay soo ururiyeen tirada rikoodh ee noocyo kala duwan oo laga soo qaaday Faransiiska. Beeralayda Yukreeniyaan ayaa ku guulaystay in ay helaan wax ka badan shan kun oo oo canab ah, kuwaasi oo inta badan laga shaqeynayo seddax dhalaalaya. Qiimaha this canab waa mid cajiib ah - khubarada aqoonsan noocyo kala duwan sida ugu qaalisan ee Ukraine.
16 dawladaha reer Yurub waxay go'aansadeen in ay midoobaan oo ay galaan dagaalkii ka soo horjeeda kulaylka caalamiga ah: Deganayaashu iskama bixin karaan kahor dhibaatada abaarta xagaaga iyo dab demiska. Hoggaamiyeyaasha wadamada yurub ayaa waxay ku dhawaaqeen rabitaankooda ah inay midoobaan "wajiga caalamiga ah" iyada oo qayb ka ah olole ballaaran oo lagu ballaarinayo dadaallada caalamiga ah si wax looga qabto dhibaatada kululaynta.
Clerks Ternopil cawska diiran
Mashruuca "Abuuritaanka Xarunta Biyoenerka iyo Maareynta Awooda Deegaanka" ayaa u oggolaanaya cilmi-baarayaasha Ukriga in ay abuuraan agroinvention aan caadi ahayn. Waxaan ka hadleynaa beer gaar ah, kaas oo dhirta laga dhigo meel kuleyl ah. Horumariyayaashana waxaa sameeyey by geesiyaal ka soo gobolka Ternopil.